कायेन: सुझावहरू र युक्तिहरू यो बढ्न र खपत गर्नका लागि - Ikkaro
मुख्य पृष्ठ >> प्रकृति >> कायेन
कायेन, अर्को प्रकार Capsicum chinense यो सब भन्दा राम्रो चिनिएको र सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएको मसलादार हो, सम्भवतः किनभने यसको ताप धेरै भए पनि प्रायजसो व्यक्तिको लागि यो सहिष्णु छ।
यसको धेरै सामान्य नामहरू छन्: लाल मिर्च, लाल मिर्च, रातो मिर्च, मिर्च मिर्च।
यसमा ,30.000०,००० देखि ,50.000०,००० SHU हरू छन् Scoville स्केल.
अहिले यो मसलादार हो जुन घरमा तालुको राम्रो सूट गर्दछ। यसले तीव्र ईन्च प्रदान गर्दछ तर ओभरडोन नगरीकन। अरूले मनपराउँदछन् हाबानेरो तिनीहरू पहिले नै मापन गर्न जाँदैछन् र धेरै खुजली हुन्छ क्यारोलिना रिपरतिनीहरू मानव उपभोगको लागि अकल्पनीय छन्, हाहा।
यो वर्ष म चाहन्छु jalapenos प्रयास गर्नुहोस्.
कसरी भण्डार गर्ने
मलाई ताजा लालको रोटी खान मनपर्दछ, तर त्यहाँ धेरै नै हुने भएकोले उनीहरूलाई के गर्ने भनेर तपाईंले सोच्नु पर्छ। हामी तिनीहरूलाई बिभिन्न तरीकाले बचत गर्न सक्छौं।
तिनीहरूलाई सुख्खा र आवश्यक परेको खपत गर्नुहोस्।
यसलाई पीस्नुहोस् र पाउडर बनाउनुहोस्
मसलादार नुन लिनको लागि यसलाई कुच्नुहोस् र नुनको साथ मिलाउनुहोस्
तेललाई मसाला बनाउन तेलले मर्ननेट गर्नुहोस्।
यी मेरो विभिन्न वर्षको खेतीका नोटहरू हुन्।
म एउटा नर्सरीमा दुईवटा फूल फुल्ने बोटहरू किन्छु। तिनीहरूसँग एक भव्य प्रदर्शन छ, भाँडोमा भए पनि तिनीहरू केयिनले भरिएका छन्। सबैभन्दा ठूलो झाडीमा मैले अन्य 92 64 मा XNUMX २ खोर्सानी लिएको छु। यो दोस्रो एक लगभग काटिएन त्यसैले म यसको बीउहरू बचत गर्ने छैन।
यस वर्ष म गएको वर्षको बिरूवा मध्ये एकबाट बिउ रोपिरहेको छु, एकदमै खुजली भएको थियो।
-6-२-२०२० मा म बीउ भिजाउँदछु र १० औँ म तिनीहरूलाई बिउ रोप्दछु र थर्मल कम्बलले राख्छु र ग्रीष्म untilतुमा पनि म लालचिन लिन थाल्छु। अझ बढी, हामी नोभेम्बरमा छौं र त्यहाँ अझै हरियो केनहरू छन्।
म यसमा टिप्पणी गर्दछु किनकि धेरै पटक भनिन्छ कि बीज रोपेको समयदेखि तपाईं3महिनामा फल फल्नुहुन्छ। तर म कहिले 5--6 महिना भन्दा अघि गएको छैन।
अन्त्यमा मैले c लालको बोट रोपेको छु, तर यस पटक कुमालेको सट्टामा मैले त्यसलाई बगैंचामा रोपेको छु। महामारीको कारणले गर्दा म उहाँसंग राम्ररी उपस्थित हुन सकेको छैन किनकि म चाहेको बेला सार्न सक्दिन।
झाडिहरू गत बर्षको तुलनामा धेरै साना भएको छ र त्यहाँ प्रति बिरूवा निकै कम खोर्सानी मिर्चहरू भएको छ। Plants बिरूवाहरु मध्ये 70०, २०१२ बाट लामो बाटो तर घरको लागी पर्याप्त।
मलाई थाहा छैन यदि सिँचाई बाहेक, जमिनले जमिनलाई प्रभाव पारेको छ, बगैंचामा रहेको जमिनले मैले वर्षौ बर्ष खेती गरेको छ र हेरविचार नगरी।
२०२१ सम्म म कम्पोस्ट प्रयास गर्न चाहन्छु।
पूर्वानुमान एक बगैचा मा, र विभिन्न जमिनहरु मा6बोट रोप्ने छ।
कसरी एक cistern फ्लश संयन्त्र अनुकूलन गर्न ...
कफि क्याप्सुलहरूको लागि ड्राईर
विभाग प्रकृति टिकट नेभिगेसन